Fitakiana tetezamita ao Soudan 246 ireo namoy ny ainy
Mpianatra amin`ny lisea miisa dimy no maty voatifitry ny basy, ny alatsinainy lasa teo, noho ny fanaovana fihetsiketsehana tao Al-Obeid ao Soudan.
“Heloka tsy azo ekena io asa fampihorohoroana io”, hoy i Abdel Fattah, filohan`ny filankevitry ny miaramila any an-toerana. Tsy tokony hosaziana ny sivily manao fihetsiketsehana, hoy ihany izy. Hatramin`ny volana desambra mankaty dia nahafatesana olona miisa 246 tany Soudan. Ny hetsika tamin`ny 3 jona lasa teo, izay nangataka ny fitondrana tetezamita hotantanin`ny vahoaka tao Khartoum, no tena namoizana ain`olona betsaka indrindra satria nahatratra 127 ireo namoy ny ainy.